यसरी बन्यो एभियसन म्युजियम, सलुट ! क्याप्टेन बेद उप्रेतीलाई – आइसिटी खबर:सूचना सञ्चार तथा प्रविधि खबर ICT Khabar.com : No.1 Tech INFO ICT News Site
Home / आइसिटी टुरजिम / यसरी बन्यो एभियसन म्युजियम, सलुट ! क्याप्टेन बेद उप्रेतीलाई
यसरी बन्यो एभियसन म्युजियम, सलुट ! क्याप्टेन बेद उप्रेतीलाई
ICT Khabar/आइसिटी खबर November 4, 2017	आइसिटी टुरजिम, आइसिटी नेपाल, आइसिटी न्युज/टेक अपडेट Leaveacomment 854 Views
क्याप्टेन वेद उप्रेतीले सात करोडको लगानीमा काठमाडौँको सिनामंगलमा फरक हवाई उड्डयन संग्रहालय ‘एभिएसन म्युजियम’ बनाएका छन् । विसं २०७१ फागुन २० गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवेको छेउमा चक्का धसिई ग्राउण्डेड भएको टर्किस एयरको एयरबस–३३० लाई एभिएसन म्युजियम बनाइएको हो ।
‘एभिएसन म्युजियम’ टर्किस एयरको विमानलाई वेद उप्रेती ट्रष्टले खरिद गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) सँग सहकार्य गरेर संग्रहालय बनाएको हो ।
जम्मा आठ महिना उडेको उक्त विमान अत्याधुनिक र एकदमै महँगो एयरबस हो । एयरबस–३३० अहिलेसम्म कुनै पनि एभिएसन संग्रहालयमा राखिएको छैन । विश्वकै ठूलो एभिएसन संग्रहालय संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा रहेकोे छ, तर यति महँगो एयरबस– ३३० अहिलेसम्म कतै राखिएको छैन, जुन नेपालका एक व्यक्तिको पहलले सफल भएको छ ।
प्रत्येक बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म खुल्ने सो संग्रहालय अवलोकनका लागि नेपालीलाई रु ३०० र विदेशीलाई रु ६०० शुल्क तोकिएको छ । कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई निःशुल्क र विद्यार्थी परिचयपत्र हुने अन्यलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिने ट्रष्टले जनाएको छ । हाल एक महिनासम्म विद्यार्थीलाई रु १२५ मा प्रवेश दिइनेछ ।
त्यसैगरी, एभिएसनको इतिहास, नेपालका महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा, धार्मिकस्थलका तस्वीर समेटिएको एरियल फोटोग्राफी ९आकाशबाट खिचेका तस्वीर० प्रदर्शनी गरिएको छ । आगामी रणनीतिसम्बन्धी वृत्तचित्र र नेपालको फिस्टेल एयरको हेलिकप्टर पनि संग्रहालयमा छ, जहाँबाट सेल्फी फोटो खिच्न सकिनेछ ।
यसरी बन्यो एभियसन म्युजियम
त्रिविअविमा ग्राउण्डेड विमानलाई धावनमार्गबाट २०० मिटर परसम्म लैजान चार दिन लागेको थियो, जसले गर्दा विमानस्थल चार दिन बन्द भएको थियो । विशाल विमानलाई विमानस्थलको पूर्वी भागबाट संग्रहालय बनाइएको स्थानसम्म लैजान र जोड्न दर्जनौँ स्वदेशी तथा विदेशी प्राविधिकले लगातार चार महिनासम्म काम गरेका थिए । जम्मा नौ महिनामा म्युजियम तयार गरिएको हो । विमान खोल्न र जोड्नमात्रै एक लाख अमेरिकी डलर लागेको ट्रष्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उप्रेतीले बताउनुभयो ।
नेपाललगायत कैयौँ देशमा अहिले नै दक्ष पाइलट अभाव रहेको स्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठन ९आइकाओ० ले विश्वभर सञ्चालन गर्दै आएको आगामी पुस्ताका नागरिक उड्डयनकर्मी कार्यक्रमअन्तर्गत संग्रहालय सञ्चालन गरी युवा पुस्तालाई यो क्षेत्रमा आकर्षण गर्ने लक्ष्य रहेको उप्रेतीको भनाइ छ ।
उप्रेतीले दुई वर्षअघिदेखि कैलालीको धनगढीमा रु डेढ करोड लगानीमा ‘एयरक्राफ्ट म्युजियम’ सञ्चालन गर्नुभएको छ ।
Previous हार्दिक श्रद्धान्जली ! आइसिटी क्षेत्रका हस्ती सिएन उपाध्यायप्रति
Next नेपालमा साइवर अपराध र बैकिङ क्षेत्रको सुरक्षा अबस्था बारे इन्फोसेक नेपालको कार्यक्रम